4 Akakosha Matipi Ekusimudzira Yako Mifananidzo Pfuma | Martech Zone
4 Akakosha Matipi Ekuvandudza Eti Mifananidzo Yako
Chipiri, February 17, 2015 Svondo, October 4, 2015 Nate Holmes
Tisati tachera mune mamwe matipi ekuvandudza zvinhu zvemadhijitari, rega kuedza Google kutsvagisa kwedu. Ita tsvake kutsvagisa mufananidzo zvine nharo imwe yemakwikwi anonyanya kukwikwidza paInternet - vana vakanaka. Google inogona sei kuisa chinzvimbo chimwe pamusoro pechimwe? Iyo algorithm inotomboziva sei izvo zvakanaka?
Heino izvo Peter Linsley, maneja wechigadzirwa kuGoogle, aifanira kutaura nezve Google yekutsvaga mifananidzo:
Basa redu ne Google Image Tsvaga kuronga mifananidzo yenyika… Isu tinoisa tarisiro yakawanda mukugutsa vashandisi vekupedzisira. Saka pavanouya nemubvunzo, uye vane mufananidzo wavari kutsvaga, chinangwa chedu ndechekupa inoenderana uye inobatsira mifananidzo yemubvunzo iwoyo.
Kunyangwe iwe uri kutsvaga kugovera inobatsira indasitiri infographic, mufananidzo unonakidza kana chero imwe dhijitari, zvibvunze - ndingaite sei kuti ndipe ruzivo rwakakodzera uye runobatsira pazvinhu zvangu zvemadhijitari?
Zano 1. Chenjerera mukusarudza zita refaira renzvimbo yako yedhijitari
Zvichida zano riri nyore nderekuudza Google nezvechinhu chedigital uchishandisa mameseji, kunyanya mitsara yemazwi. Kunyangwe chiri mufananidzo, graphic kana vhidhiyo, gara uchitanga neakagadziridzwa zita refaira. Ko Amakuru asesenguye zvine zvazvinoreva kwauri? Zvichida kwete. Asi kuseri kweiyo generic faira zita iri pikicha yeinonakidza yeBritish lab puppy inonzi Buster - uye iye akanaka chaizvo!
Panzvimbo peiyo auto-inogadzirwa kana generic faira zita, edza rakanyanya zita zita senge, akanaka-siberian-husky-puppy.jpg. Zvino, isu takafukidza kuwanda kwemazwi ekutsvaga mune rimwe nyore, rinoenderana zita refaira. Zvinosanganisira:
Akanaka Husky Puppies
Akanaka Siberian Husky
Zvakanaka, handizvo? Uye nekuchengeta mazwi akakosha muzita rezita rinoenderana nemufananidzo, uye zvirimo-peji zvakabatana nazvo, uri kuwedzera mikana yako yekuva nevashanyi vanokuwana. Zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti mazwi akakosha auri kushandisa anoenderana nechero zvauri kuburitsa muadhijita yedhijitari. Zvakakosha sekuseta yakanaka seti yemazwi echirevo ekushandisa neyako yedhijitari zvinhu.
Kana zvaitwa nemazvo, iyi inogona kuita yakaoma maitiro, asi kudzidza maitiro ekushandisa Google's Keyword Planner inogona kukubatsira iwe kuona zvirinani mazwi akakosha ekushandisa.
Zano rechipiri: Shandisa mazwi akakosha mune yako imwe nzira yekupinda mameseji ekupinda
Izvo zvinonziwo se shandura, ino imwe nzvimbo iwe yaunoda kuda kukwidziridzira dhijitari zvinhu kuti upe injini dzekutsvaga misoro kumusoro kune izvo izvo zvinhu zviri nezve. Kazhinji, yako alt zvinyorwa zvinogona kutaridzika zvakafanana nezita rako refaira. Musiyano uripo pauri unofanirwa kunge wakaita semutsara unoverengwa.
Kudzokera kuzita refaira pamusoro, isu tingangoda kushandisa, Akanaka Siberia Husky Puppies, kana kana isu tichida kutsanangura zvakanyanya, Iyi imbwa dzeSiberian Husky dzakanaka kwazvo. Izvi hazvidi kuve mitsara izere, asi zvinofanirwa kuve zvine musoro kuziso revanhu.
Izvo zvataurwa, zvakanyanya kupfupisa zvirinani. Iwe uchazoda kunzvenga izvo zvinonzi stuffing, inotaridzika seiyi: imbwa imbwa imbwa puppy pups imbwa imbwa imbwa husky siberian imbwa inomhanya muhuswa. Muchokwadi, pane mukana Google inogona kukuranga iwe nekuda kwemhando idzi dzekupusha matekiniki.
Iyi mimwe mienzaniso yezvinyorwa zvinyorwa:
Zvakaipa: alt = ""
Zvirinani: alt = "imbwa"
Kunyangwe Zvirinani: alt = "vana vehusky husky varara"
Zvakanakisa: alt = "siberian husky puppies dzakarara pamusoro chena kumashure"
Zano 3: Shandisa zvirimo zviripo zvinotsigira imwe neimwe yedhijitari aseti
Google inoshandisa zvirimo pamapeji ako kuenderera mberi nekuona kana peji rako rewebhu rakaenzana nemutsara wekutsvaga. Iwo akakosha mazwi mitsara iwe auri kushandisa mune ako edhijitari zvinhu anofanirwa kuvewo munzvimbo senge yako musoro wenyaya, misoro yenyaya uye peji kopi. Iwe unogona zvakare kufunga nezvekuwedzera chinyorwa chemifananidzo yako, kana kuti zvimwe zita rinotsanangudza.
Rangarira, kana iwe uri kutarisira kukwidziridza zvemukati zvako, ita shuwa kuti Google inogona kukambaira imba yeHTML peji uye iyo pfuma pachayo. Mune mamwe mazwi, usaisa PDF yemavara iyo Google isingakwanise kuverenga.
Zano 4: Gadzira rakakura mushandisi ruzivo
Kana zvasvika pazviri, Google iri kuyedza kugadzira yakanakisa yemushandisi ruzivo, ichifananidza yakatsvaga kiyi yemutsara mutsara nemhedzisiro yakakodzera. Kana iwe uchida kuti yako yedhijitari midziyo igadziriswe yekutsvaga, iwe unozofanirwa kugadzira iyo yakanakisa mushandisi ruzivo inogoneka. Izvi zvichabatsira kumusoro kwese simba yewebsite yako, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti uwanikwe. Kunge munhu chaiye, Google's algorithm inoziva kana peji rako richipa yakanaka mushandisi ruzivo, kana husiku husiku.
Zvinorevei kupa yakanaka mushandisi ruzivo?
Mifananidzo yakanaka, yemhando yepamusoro - Dzidza mabhesiki ekuchengetedza akajeka, akapinza mifananidzo pamhepo. Izvi zvinopa mufananidzo wako kumucheto kana padivi-ne-padivi nemimwe mifananidzo inoonekwa mune dzekutsvaga mhinduro, izvo zvinogona kutungamira kune kumwe kubaya.
Isa zvinhu zvako zvemadhijitari padyo nepamusoro peji - Kuchengeta zvemukati pamusoro pechipfuva kunowedzera iwo fananidzo yekutariswa. Uyezve, mifananidzo inokwanisa kuwedzera kubatanidzwa, ichiita kuti muoni anyanye kuverenga kopi yacho!
Taura upamhi uye kukwirira kwemifananidzo yese - Izvi zvinogona kubatsira kumhanyisa peji kurodha izvo zvinowedzera mushandisi ruzivo. Ungangoda kutamba uchitenderedza izvi zvishoma kuti uone saizi inotaridzika zvakanyanya pamapeji ako ewebhu.
Dzivisa kutsausa vashanyi vako - Isa mazita akakodzera emafaira uye uve nechokwadi chekuti midziyo yedhijitari inoenderana nemapeji aripo. Kana zvinhu zvako zvemadhijitari zviri zvembwa, ngatirege kuwedzera mazita evanozivikanwa vanhu vane mukurumbira kuti vangowana traffic yakawanda.
Kunyangwe ini ndisina puppy blog yekubatsira kuvhura Buster muGoogle Kutsvaga stardom, ini ndinovimba aya matipi anokubatsira iwe kukwidziridza ako edhijitari zvinhu!
Tags: google chifananidzo chekutsvagaimage optimizationgonesa mifananidzo
Nate Holmes ndiye mushambadzi wekushambadzira we Wedzera Makambani uye iyo Smartimage brand kuwedzera. Nate ane kufarira kwakasimba mukutungamira kwechiratidzo, kushambadzira zvemukati uye analytics yekushambadzira. Nate anonakidzwa nekushanda nevanhu vanobva kwakasiyana mumasangano ehukuru hwese, kubva pakushambadzira zvikwata zvekutaurirana kumabhizinesi makuru kusvika kuvakuru vemabhizimusi madiki-kusvika-pakati.
Ungarega Sei Pizza Yako… er… Chigadzirwa Chizvitengese Chiri Pamhepo
Crank Up Yako Yemukati Kushambadzira nekuona Aya matanhatu Mepu
Feb 22, 2015 at 8:50 PM
Nice one Nate - Ini ndatanga chaizvo kuona mabhenefiti ekuve neakareba uye anotsanangudza maal tags nemifananidzo yangu. Iyo imwe nzira ine simba yekutengesa kuti mifananidzo yako iratidzike mukutsvaga kwemifananidzo. Zviri pachena kuti mushandisi anogona kubaya pane iyi link yemufananidzo uye kunyatsoshanyira saiti yako.
Pane here nhungamiro nezve "rondedzero" uye "chinyorwa" zvinhu zvemifananidzo? (muWordPress kunyangwe kana wakashandisa)
Kukadzi 23, 2015 na2: 29 PM
Ndatenda, Nate, nekujekesa pane aya matipi anobatsira 😀
Kukadzi 23, 2015 na9: 08 PM
Mhoro Ahmad! Kana iwe uchitevera iwo mana matipi ataurwa pamusoro, iwe mifananidzo uri akanaka akanyatsogadziriswa. Kana mumwe munhu achida kuziva kuti chifananidzo chii, iyo Alt Image Tag ichavaudza, uye Google iri kutarisa iyo Alt Image Tag uye zita remufananidzo weiyo SEO kukosha. Ini pachangu handisi kushandisa rondedzero kana zvinyorwa zvemusoro. Kana iwe ukagara munzvimbo idzodzo, ini ndinokurudzira kukurudzira kuzadza iyo minda kune maziso evanhu. Kutenda nekuverenga!